गाडी भाडा १५ प्रतिशतसम्म बढ्यो, कहाँ पुग्न कति लाग्छ ? (सूचीसहित) • Nepal's Trusted Digital Newspaperगाडी भाडा १५ प्रतिशतसम्म बढ्यो, कहाँ पुग्न कति लाग्छ ? (सूचीसहित) • Nepal's Trusted Digital Newspaper
गाडी भाडा १५ प्रतिशतसम्म बढ्यो, कहाँ पुग्न कति लाग्छ ? (सूचीसहित)
सरकारले सार्वजनिक गाडीकाे भाडा १५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चैत १७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार यात्रुवाहक गाडीको भाडा १० प्रतिशतसम्म बढाइएको जनाएको छ ।
अब इन्धनको मूल्य पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले घटबढ भएमा त्याेअनुसार स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।